युगसम्बाद साप्ताहिक - महामण्डले चरित्र प्रदर्शनले गणतन्त्र कति सुरक्षित
महामण्डले चरित्र प्रदर्शनले गणतन्त्र कति सुरक्षित
Wednesday, 10.02.2019, 05:17pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । पञ्चायतकालमा सत्ताको बिरोध गर्नेहरुमाथि तत्कालीन सत्ताले गठन गरेको युवा दस्ता विद्यार्थी मण्डल (जसलाई मण्डले भनिन्छ) आक्रमणमा उत्रन्थे । अहिले गणतन्त्रमा पनि सरकारको बिरोध गर्नेहरुमाथि त्यस्तै चरित्र प्रदर्शन भैरहेको छ । भौतिक आक्रमण सुरु भएको छ । अहिले सत्तापक्षको आक्रमण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र अभियन्ताहरु भएका छन् ।
केही समयअघि बाँकेमा नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानका क्रममा नेकपाका स्थानीय नेताले आक्रमण गर्दा कांग्रेस बाँके जिल्ला सभापतिसहित केही घाइते भए । यो घटना सेलाउन नपाउँदै अस्ति शनिबार नागरिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा सांघातिक आक्रमण भयो । उनी गम्भीर घाइते भएका छन् ।
यो घटना लगत्तै तनहुँमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि आक्रमणको प्रयास भयो । आइतबार तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका भवन शिलान्यासका लागि जानुभएका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि नेकपा कार्यकर्ता आक्रमणको प्रयास गरेका हुन् । सदरमुकाम दमौलीबाट रिसिङ गाउपालिका जाने बाटोमा नेकपाका कार्यकर्ताहरुले उहाँलाई गाउँपालिका कार्यालय जान नदिन बाटोमा रुख ढाल्नुका साथै ढुंगा राखेर अवरोध सिर्जना गरी आक्रमणको प्रयास गरेका थिए ।
आफूमाथि आक्रमणको प्रयास भएपछि नेता रिजालले भन्नुभयो “४–५ ठाउँमा रुख ढालेर, बाटोमा ढुंगा राखेर अवरोध सिर्जना गरेका थिए । हतियार, ढुंगा, लाठीसहित आक्रमण गरे । साथीहरुले जोगाउनुभयो, बचियो । प्रहरी प्रशासनको आडमा उनीहरु आक्रमणमा उत्रिए ।”
गाउँपालिकाको बैठकले सर्वसम्मतिबाट भवनको शिलान्यास कांग्रेसका नेता रिजालबाट गराउने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाको निर्णयका विषयमा प्रहरी प्रशासनलाई समेत जानकारी रहेको बताइएको छ । सो गाउँपालिकाको अधिकांश स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो ।
आफूमाथि आक्रमण भएपछि नेता डा रिजालले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र नेकपा अध्यक्षसंग कुनै कुरा नगर्ने बताउँदै शान्ति सुरक्षा जस्तोा विषय सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग भिख माग्ने हो र भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो “कांग्रेसले जितेको ठाउँमा त सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता यसरी उत्रिन्छन् भने अन्य ठाउँमा के होला । तर हामी पनि कमजोर छैनौं भन्ने कुरा हामी देखाउन चाहन्छौं । अहिले मण्डलेकरण दोहोरिएको हामीले महसुस गरेका छौं । यो क्रम रोकिएन भने हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौं ।”
ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्ति र उनले चलाएको भण्डाफोर अभियानमा सत्तारुढ दलका नेता मात्र हेन प्रतिपक्षका नेताहरु पनि मुछिने गरेका छन् । उनी भष्टाचार बिरोधी अभियानमा छन । यस्तै कार्यक्रमका लागि चितवन पुगेका उनलाई गणतन्त्र पक्षधरको आलोचना गर्दै हिँडेको भन्दै साङ्घातिक आक्रमण भयो । भरतपुरको चौविसकोठीमा शाहीको समूहले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम बिथोलिएपछि बसेको होटलबाट बाहिरिने क्रममा दिउँसो उहाँमाथि आक्रमण भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरको होटल ग्लोवलबाट बाहिरिने क्रममा बा३ख ८४५८ नंको माइक्रोबसमा आक्रमण भएको हो । युवा समूहले ढुङ्गा, रड, लाठी प्रहार गरी माइक्रोबसभित्र रहेका शाहीसहितको समूहमाथि आक्रमण गरेको हो ।
घाइते शाही चितवन मेडिकल कलेजको उपचारपछि काठमाडौँ ल्याइएको छ । उहाँको अवस्था खतरामुक्त रहेको छ । शाही खुट्टामा चोट लागेको छ भने टाउको र शरीरमा समस्या भएको छ । आक्रमणमा घाइते भएका अन्य दुईको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।
चितवनका प्रहरी उपरीक्षक मल्लका अनुसार सो क्रममा आक्रमण गर्ने नेकपाका एक जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट युवाहरूले चौविसकोठीमा शाहीले सम्बोधन गर्ने गरी गर्न लागिएको कार्यक्रम बिथोलेका थिए । झडप हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले पनि कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेपछि कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।
ज्ञानेन्द्र शाही ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका संयोजक हुन् र उनको यो अभियानमा राष्ट्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुको संलग्नता छ । शाहीले देशव्यापी दौडाहा गर्दै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बेथितिका बिरुद्ध आवाज उठाइरहका छन् । तर यो काम सत्तापक्षलाई पटक्क पचेको छैन ।
दुई साता अघि बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले जहाज कुराएर यात्रुहरुलाई समस्यामा पारेको भन्दै विमानभित्रै उहाँको आलोचना भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि सत्तारुढ नेकपाका युवा संगठन आक्रोशित भन्दै उनीमाथि खनिएको थियो । युवा संगठनका विभिन्न जिल्लाले त शाहीलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गरेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै घोषणा गरेका थिए ।
शाहीलाई प्रवेश निषेध गर्ने जिल्लामा चितवन पनि पर्दछ । निषेध गरिएको जिल्लामा कार्यक्रम गर्न आएको भन्दै उनीमाथि आक्रमण भएको बुझ्न कठिन छैन ।
डेंगु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल (09.10.2019)
नेकपामा अध्यक्ष ओलीको एकछत्र रजाइँ ! (08.20.2019)